5 Xaaladda Arrimaha - Gofumed
5 wuxuu leeyahay xaalada
Disember, 2009 ArcGIS-ESRI, egeomates My, Leisure / waxyi
Saaxiibo qaali ah, waxaan jeclaan lahaa in aan sii daayo gabay ka kacaya nostalgia, laakiin waxay noqon doontaa maalin kale. Hadda waxaad ku riyaaqeysaa fasax taas kharashka, halkan faahfaahin dheeraad ah.
Gabadhaydu waxay lahayd baaskiiladeeda ugu horeysay iyada oo aan lahayn jilbaha taageerada ... aniguna halkaan ayaan joogay.
Wiilkaygu wuxuu ku qaatay nus maalin jimicsiga Wii-ta, waxaan isku dayay, laakiin xayawaanku wuxuu ii sheegay inaan dhameeyo xaddiga 21.
Waxaan jeclahay inaan wax cunaya at tamalitos chambray, waxaan filayaa dubay turkey iyo baradho salad a sidii aan jeclaan, la tufaax. Dhegayso risaasta qaar ka mid ah, sababtoo ah waxaa xitaa ma mamnuuc bannaan iyo berri badbaadin dhigi doonaa maraq badda iyo sayidkaygiiyow aabbihiis.
Inta soo hartay, hurdada u jiifso 9 si ay u buuxiyaan wakhti 6 wakhti ku filan. Kaga soo bax si aad u aragto ugu dambeyntii Francisco J Forum Gabriel Ortiz oo ku raaxeysta modem kaas oo isku xiraya astaamaha moobilka.
The Aspire One waa wax cajiib ah tan, iyo in la ciyaaro wax yar, tijaabinta ArcGIS 9.3, si cajiib ah u taageeraan awood badan oo farabadan.
Markaad ku guulaysato waxaan idiin rajeynayaa inaad tahay farxad aad u wanaagsan.
Post Previous«Previous Ugu dambeyntii, waan furanahay!
Post Next Aulasca, kheyraad badan oo GIS ahNext »
3 Jawaabo "5 xaaladaha"
Waan ka xumahay Waxay ahayd tusaale, laakiin haddii ay raadinayaan waa maxay shanta dawladood ee arrinta:
5 Kondensat ee Bose-Einstein
oo halkan waxad ka akhriyi kartaa wax badan:
jhon isagu wuxuu leeyahay:
waa inay bixiyaan macluumaad dheeri ah
qosol isagu wuxuu leeyahay:
Tani waa wax walba oo aan fahamsanahay wax aanan fahmin